Mujeres Mundi, Tafatafa Amin’ny Vehivavy Tsy Fahita Mahazatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2012 11:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Français, 繁體中文, 简体中文, Español
Ity no Fizarana voalohany amin'ny tafatafa nozaraina ho roa.
Manasongadina ny asam-pampandrosoana ataon'ny vehivavy mahavita be eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina manerana ny tany ny tafatafa ao amin'ny bilaogy Mujeres Mundi — ahitana ny mpiasa mpamonjy ny maha-olona [mpanao fanampiana] Charlotte Dufour avy any Frantsa sy ny mpiaro ny zon'olombelona Natasha Latif avy any Singapore, ary ahitana ny mpanangom-baovao mampihoron-koditra Mariam Alimi avy any Afghanistan ary ilay mpiaro ny biby Molly Mednikow avy any Etazonia.
Xaviera Medina de Albrand, teratany ao Pucallpa any amin'ny faritra Amazona peroviana, no atidoha sy nandany hery tao ambadik'izany bilaogy izany. Ao amin'ny mombamomba azy, no hanavazavany ny “lahatra (sy fitiavana)” nahatonga azy nandao an'i Però ho any Paris, Frantsa: “Tsy nikasa ny ho mpitety ny glaogy aho saingy, ny lahatra nandritra ny asa, no nisidinako an'i Afghanistan, niodina nanavatsava an'i Emirà Arabo, Azerbaijan ary India.” Ankehitriny monina ao Brussels (Belzika) miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany vavy izy.
Manazava i Xaviera fa miezaka ny “hampiaraka ny serasera, haivarotra ary ny fitaovana avo lenta ho fampiroboroboana ny fanairana sy hamadika ny serasera ho fikatrohana [izy]. Amin'ny maha-mpanorina ny Mujeres Mundi (Tontolon'ny Vehivavy Manerantany) ahy, resy lahatra aho fa ny fanaovana izao no dingana voalohany.” Holazain'i Xaviera antsika kely amin'ny alalan'ity tafatafa ity ny momba ny fiainany sy ny bilaoginy.
Nahoana no “Mujeres Mundi” ny anarany?
Sahala amin'ny kisendrasenda no nahazoana ny anarana. Niainga tamin'ny “Vehivavy Miasa” aho no tonga tany amin'ny “Mujeres Mundi” satria nieritreritra aho tamin'ny voalohany ny hampiaraka ny hevitry ny vehivavy miasa = fandraharahàna, saingy te-hihoatra izany aho ary niresaka lohahevitra ara-tsosialy ihany koa. Nanandrana anarana hafa tahaka ny Femina aho saingy tahaka ny gazety-bokin-damaody ny fahenoana azy, ary raha tsy misy zavatra anoherako azy ireny aho, tsy tena mankany amin'ny tanjona voalohan'ny tetikasa ilay izy. Taty aoriana aho nieritreritra ny Women World, saingy efa be loatra ny “W” (avy amin'ny Women), hany ka tamin'ny farany aho tonga tamin'ny Mundi ka tiako ny feo manonona azy.
Mikendry ny isian'ny fahatsiarovantena amin'izay mety ho vitantsika vehivavy amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina ny Mujeres Mundi. Inona no nahatonga anao hifantoka amin'io lohahevitra io?
Nanana ny Mujeres Mundi, nitombo tsikelikely tao an-dohako sy tao am-poko aho tamin'ny faran'ny taona 2009 raha niteraka ny zanako vavy. Taty aoriana, noho ny fizaran-draharaha nananako fony niasa teo amin'ny fifandraisana ara-tsosialy tao Afghanistan, hitako fa ilaina ny mampita ny ezaka ataon'ny [tsirairay] maningatsingana maro ho fampandrosoana ny fiaraha-monina misy azy, ambonin'ny zavatra rehetra fa eo amin'ny sehatra bitika.
Avelao hazavaiko io teboka iray io: Nandritra ny maha-mpiasa ivelan'ny firenena ahy, nanana fotoana aho hahafantatra sy hiara-miasa amin'ny vehivavy sy lehilahy manolo-tena manokana ho amin'ny asam-panampiana, mametraka mialoha sy alohan'ny zava-drehetra ny hasarobidin'ny asa ataony miohatra amin'ny zavatra hafa. Nifanakaiky tamin-dry zareo ny tontolo nisy ahy saingy tsy nitovy — niasa ho amina orinasa tsy miankina hatrany aho saingy misahana tetikasa ara-tsosialy. Ary nisy ny fotoana, nieritreritra ny asam-pikatrohana nataon'ireo olona isan-karazany ireo aho ary hitako fa ohatra mendrika arahina ny mahaizy azy ireny tsirairay sy ny tetikasany ary nino aho fa loharanom-piovana amin'ny fiaraha-monina tahaka ireny ny ohatra asehon'izy ireny, na dia mety ho amina kilometatra vitsivitsy amin'ny toerana misy azy ireny monja aza.
Oviana no nanomboka ny Mujeres Mundi?
Nanomboka nahazo endrika ny Mujeres Mundi tamin'ny Febroary 2012, ary somary hafahafa ihany fa tamin'izaho very asa tany Brussels (izay toerana niainako nandritra ny roa taona farany) satria bankirompitra ny orinasa niasako. Raha manome voasary makirana (lemons) ho anao ny fiainana, manaova limonady (lemonade)! ka niteny tamin'ny tenako aho, “izao aho no manam-potoana hanatontosana ny tetikasako.” Nanan-kevitra maro aho — tahaka ny teorian'ny Big Bang tao andohako izany! — saingy teboka iray ihany no tena nazava tamiko: te-hifantoka amin'ny lohahevitra miompana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy aho, handray ohatra indray ny fiainana tena nisy mba ho loharanom-piovàna. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy afa-miresaka zon'olombelona, fampandrosoana ara-tsosialy, fahasalamana, politika, eny na dia ny tontolo iainana aza isika raha tsy miresaka momba ny vehivavy. Tahaka ny hoe ny lohahevitra miompana amin'ny vehivavy no mameno ny hafa rehetra.
Xaviera Medina de Albrand, sary nahazoana alalana
Mihevitra ny tenanao ho feminista ve ianao?
[…] maro ny mihevitra ahy ho feminista ka raha lazaiko aminao ny marina, tsy mampaninona ahy izany, saingy mihevitra ny tenako ho mifanakaiky indrindra amin'ny homanista (sady misy daozy kelin'ny animalisma) aho. Avy amin'ny fiarahamonina sady efa niainako rahateo izany mametraka ny vehivavy ho ambanin'ny lehilahy aho ary ny mba hany azo natao dia ny nanaisotra ny tsy nilaina… nefa raha ny marina afa-niara-nanala ny tsy ilaina izahay! Tsy voatery ho mpitarika sampandraharaha maro rantsana na filoham-pirenena ianao vao ao anatin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina, fa toe-tsaina izany.
Ifampitafatafàna avokoa ny karazam-behivavy rehetra ao amin'ny Mujeres Mundi, ahitana mpikatroka ka hatramin'ny mpitantana orinasa, fangaro milza izany hoe “tsy dia maninona loatra ny hoe aiza no misy anao, fa izay ataonao no mety hisy fiantraikany sy lanjany izay tsy noeritreretinao akory.” Afa-manonon manokana amin'ny vehivavy efa nanaovan'ny tetikasa tafa sy dinika aho… saingy tokony hanonona azy rehetra aho satria fianarana (“ohatra”) avokoa izy rehetra! tsara ny manamarika –fa na dia vehivavy aza ny ankamaroan'ny vehivavy nanaovana tafatafa, misy ihany koa ny lehilahy no nanandratra ny anjara toeran'ny vehivavy tamin'ny fampivelarana [fampandrosoana] ny raharahany.
Nahoana no mifampitfatafa amin'ny vehivavy raha azo natao ny manoratra azy ireny fotsiny?
Satria izay no manome bebe kokoa ny fahatsapan'ny tsirairay. Na izaho aza nitady ny hifampiresaka amin'izy ireo, fa hatramin'izao tafa am-bava avokoa ny tafatafa rehetra. Marina fa mora kokoa ny mi-“google azy ireo,” mahangom-baovao sy manoratra ny momba azy ireo, saingy mila miresaka amin'izy ireo aho, mahalala azy ireo. Any amin'ny farany ny tafatafa, izay no zavamisy, tahaka ny lasa resadresaka eo amin'ny mpinamana. Omeko lanja manokana ny lantom-peo sy ny fihetseham-po miseho rehefa miresaka ny tantarany ry zareo, tsy misy Google hanome ahy izany. Tahaka izany ihany koa, tsy misy fahafaham-po, amin'ny famitana ny tontolo androko ankoatra ny nahafahana nifampiresaka tamin'izy ireo. Samy manana ny fitiavany ombam-pikirizana amin'izay ataony ny tsirairay hany ka mifindra ilay izy! Daozina vitamina amiko ireny.
Sarotra ve ny fahazoana mitafatafa amin'ny maha-bilaogera tsy miankina anao?
Soa aho aloha fa mahafantatra vehivavy maro mendri-piderana, tena olomanga, ka izay no nahatonga ny tafatafa voalohany, satria nifampitafatafa tamina vehivavy maro efa fantatro aho sady namako ry zareo. Mbola tsara vintana aho satria ny maro amin'izy ireo, ankoatra ny artista sy ny mpikatroka rehetra, nanaiky tsy nisy fisalasalana. Mazava loatra fa misy ny olona tsy namaly mihitsy ny mailako, saingy oh… Ny zavatra tena mahaliana ahy dia rehefa mahazo valiny mahafa-po avy amin'olona efa malaza aho, misaotra ahy amin'ny fahafahako nampahafantatra ny tetikasany… nefa izaho ny mankasitraka azy ireo tamin'ny firesahany amiko!
Any amin'ny fizarana faharoa amin'ity tafatafa ity no iresahan'i Xaviera amintsika ny dika amin'ny teny anglisy sy frantsay ny Mujeres Mundi sy momba ny tetikasa izay te-hamaly ny fanontaniana, “Ahoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy anao?”
Azonao arahina i Xaviera sy ny Mujeres Mundi ao amin'ny Twitter sy ny Facebook.
Soratra miverina: Mujeres Mundi, “Ahoana Ny Anjara Toeran’ny Vehivavy Eo Amin’ny Fiarahamonina Misy Anao?” · Global Voices teny Malagasy
[…] Amin'ny fizarana voalohany [teny malagasy], no niresahan'i Xaviera Medina de Albrand ny bilaoginy, Mujeres Mundi [Tontolon'ny Vehivavy], izay amoahany ny tafatafa nifanaovany tamin'ny vehivavy manerana izao tontolo izao. Amin'ny fizarana faharoa no iresahan'i Xaviera ny lanjan'ny fampielezana ny tafatafa nifanaovany tamin'ireo olona zatra fiteny hafa. Resahiny eo ihany koa ny tetikasa manokana nampitondrainy ny lohateny hoe “Ahoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy anao?” […]
07 Septambra 2012, 18:59